Vaayirasiin komputerakoo hojiin ala najala godhe maal naaf wayya ? – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Vaayirasiin komputerakoo hojiin ala najala godhe maal naaf wayya ?
Waayeen vaayirasi komputeraa kuun akka inni gaaffi baayyee kessannii tahee ni hubana ,mee barreffama keenya hara kessatti waayee kana isin hubachifna. Vaayirasimti komputera kun maalii ? essaan komputeera keenya seenti ? nyaatanimoo bishaaniin ? nama kofalchisa miti ?
Vaayirasiin komputeera maalii ?
Jalqaba irratti maqaan vaayirasii jedhu kun kahumsumtisaa afaan warraa yaalati ykn meedikaalati innis organizimi duhaaf jireenya giddu jiraatu jechuudha yoo jenne komputera kessattimoo organizimi miti kana jechun kan komputera irraa gara namati darbu miti , akkasumas kan nama irraa gara komputeratti darbuus miti.
Vaayirasiin komputeraa jechuun softiweeri ykn koodi programming dhimma dhunfa itti bahudhaaf barrefame qophahudha kanas kan qoophessu namoota dandeettii koodi softiweeri barreessu dandaahanindha malee kan tasa umaamu miti, namotni vayirasi hojechuti dhimma bahan badidhaaf ykn taphaaf taha. Akka toora marsaritti addaa addaa irratti maxanfamee jirutti vaayiraasiin yeroo jalqabaaf kan qophaahee baratoota yunivarsititin dandetti pirograammingi ykn koodi barressu waliti agarsisudhaaf fedha qabaniin ture. Achumaanis yaadi kun babalacha adeemuun hojii seeran ala ittin rawwachuudhaaf namoti baayyeen dhimma itti bahuu jalqaban. Kaayyoon isaan itti dhimma bahuudhaaf fayyadaman keessaa tokko odeeffanno ittin hatuuf, halo ittin waliti bahuuf , samicha addaa addaa ittin rawachuuf , ittin wal hordufuf kanaf kan fakkatanfadhaafi.
Erga waayee vayirasii hamma kana jenne gosoota isaamoo ha dubbannu , namotni koodi vaayirasii kana barressan yeroo hanga yerootti vaayirasi dhimma addaa addatif itti fayadaman kana gosa isaa jijiruun kalaquu jalqaban goosoti vaayirasoota kana mogassa argachaa dhufani jechudha. Maqaa vaayirasoota kana keessaa yartuun (Trojan horse, Spyware , Malware , Worm virus, … jedhamu). Amalotni vaayirasonni kunis agarsisan akkuma gosa gosa isaanitti gargari dhibbaan isaanis wal caala jechudha.
Mee gaaffi kana isin gaafana , Vaayirasin komputeraa kun bala maali isinirraan gahee beeka ? komputera kessan irraa odeffanno ykn data balessee beekaa ? Passwordii ykn lakkofsa darbii kessantu isin jalaa hatamee ?
Akkuma vaayirasin lubbu qabeyyii hubu qoricha qabu kan komputera hubus qoricha qaba innis antivayirasii jedhamuun bekama! Antivaayirasiin kun vaayirasi komputera keenya kessa seene qulqullessuuf nu gargara , moosaajiin antiivaayirasii kuun dhabata addaatiin kan omishamanidha dandeettin gahumsa isaanis akkuma goosa gosa issaatti gargari. Gosa kam akka filachuun isinirra jiru adda baafachuudhaaf kan ilaalcha kessa galchuu qabdan inni guddaan gahumsa komputeeraa kessanitti kana jechuun piroosasariifi raami komputera kessani jechuu keenya, Maaliif yoo jettan moosaajiin kun (Background process) waan godhuuf safissa komputeera kessan irratti dhibbaa qaba jechudha. Kanaafuu kan komputera kessan wajjiin walsimuu bitachuu ykn kan bilisaan toora marsariti irra jiru download godhachuu dandeessu.
Kutaan lammaffaa isaa itti fufa …